DEG DEG:- Xasan Sheekh oo dhoolatus aan caadi ahayn haatan ka wada Muqdisho (SAWIRO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Xasan Sheekh oo dhoolatus aan caadi ahayn haatan ka wada Muqdisho (SAWIRO)
In ka badan 200 oo xildhibaan oo la sheegayo inay si weyn u taageersan yihiin musharaxnimada markale ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan isugu tagay Hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho, iyagoona halkaasi dhoolatus ka sameeynaya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah musharixiinta haatan ugu cad-cad tartanka doorashada xilka madaxweynaha ayaa xildhibaanadaasi ku casuumay qado sharaf oo ay ku muujinayaan taageeradda ay isaga u haayaan.
Xildhibaanadaasi ayaa lagu wadaa in maalinta berri ay doortaan madaxweynaha cusub ee dalka hogaamin doonna 4-ta sano ee soo socota.
Xaflada dhoolatuska ah oo weli socota ayaa u muuqata mid uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kusoo beegay iyadoo muddo 24 saac ka yar ay ka harsan tahay xilliga ay dhici lahayd tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Qaar ka mid ah xildhibaanada labada Aqal ee ku sugan Hoteelka SYL oo goordhaw la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in codadkooda ay siin doonaan Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaas oo u sababeeyay inuu yahay shaqsi hore usii wadi kara hogaanka dalka.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la sheegayaa inuu goordhaw gaaray Hoteelka SYL, isagoona halkaasi ka jeedin doonno khudbad dhinacyo badan taabanaysa.
Si kastaba ha ahaatee, doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri ay ka dhacdo xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho, iyadoona ammaanka goobta ay doorshada ka dhaceeyso ay tahay mid aad oo adkeeyay.